အဓိကဒြပ်နည်းပညာ – CNC စက်မှုလုပ်ငန်းခေါင်းဆောင်
ကျွန်ုပ်တို့သည် CNC နယ်ပယ်ကိုနှစ်သက်သောစိတ်အားထက်သန်သောပညာရှင်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်。အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာများနှင့်အရောင်းအတိုင်ပင်ခံများသည်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁၀ နှစ်ကျော်ရှိသည်。
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုးမဲ့ဂီယာနှင့်ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုအနှစ် ၂၀ ကျော်အာရုံစိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်，စက်မှုအဝေးသင်ထိန်းချုပ်မှုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်、ကြိုးမဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်ကိုင်、စီအင်စီအဝေးထိန်း、လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ကဒ်、ပေါင်းစည်းထားသော CNC စနစ်များကဲ့သို့သောစက်မှုလုပ်ငန်းများမှထောင်ပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များ。
စုစုပေါင်း core ကိုနည်းပညာ，ဘ ၀ သစ်တစ်ခုကိုရယူပါ။ - စုစည်းခြင်း၏အဓိကနည်းပညာ，ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်；စားသုံးသူအများစုအတွက်ပိုကောင်းတဲ့ဘဝအတွက်，လုံ့လဝီရိယ。
ဘက်ပေါင်းစုံ CNC စနစ်
ကြိုးမဲ့ဂီယာနှင့်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုနှစ် ၂၀ ကြာအာရုံစိုက်ပါ
Wixhc သည်ကြိုးမဲ့ဂီယာနှင့် CNC ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုတွင်ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များအား CNC စက်ကိရိယာများဖြင့်ပေးသည်、သစ်သား、ကျောက်ခေတ်、သတ္တု、ဖန်နှင့်အခြားပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများတွင်အဆင့်မြင့်နည်းပညာ、တန်ဖိုးနည်း、မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်、ဘေးကင်းလုံခြုံထုတ်ကုန်、ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ。
Wixhc သည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်、ဟင်းသီးဟင်းရွက်、အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အရောင်း，ကြိုးမဲ့ဂီယာနှင့်စီအင်စီရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုကိုနှစ် ၂၀ ကျော်အာရုံစိုက်ပါ。
ကျနော်တို့စက်မှုဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်မှုမှကျူးလွန်နေကြသည်、ကြိုးမဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်ကိုင်、စီအင်စီအဝေးထိန်း、လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ကဒ်、ဘက်ပေါင်းစုံ CNC စနစ်နှင့်အခြား CNC ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်。
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်ပွင့်လင်းသည်，စဉ်ဆက်မပြတ်ဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးကိုဖန်တီးပါ，ကြိုးမဲ့အလားအလာကိုထုတ်ဖော်ပါ，အဖွဲ့အစည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလှုံ့ဆော်。7 * 24 နာရီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး。
ဆန်းသစ် R & D အဖွဲ့
ကုမ္ပဏီ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမဟာဗျူဟာမှာရှင်းပါသည်，ကုန်ပစ္စည်းဆန်းသစ်တီထွင်မှု，ထိရောက်သောစီးပွားရေးပုံစံ，Diversified အဖွဲ့ယဉ်ကျေးမှု，ဆန်းသစ်တီထွင်မှုစနစ်များနှင့်ယန္တရားများ၏ပြီးပြည့်စုံသောအစုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သည်，တစ် ဦး ဆန်းသစ် R & D အဖွဲ့နှင့်ခိုင်ခံ့ R & D ကိုခွန်အားရှိသည်，CNC ဖြေရှင်းချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်ခိုင်မာသောအာမခံချက်ပေးပါ。
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိနိုင်ငံပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်、150ပုံမှန် application များကိုအမျိုးမျိုးသောစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်သောင်းချီသောဖောက်သည်များစုဆောင်းထားသည်。ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်နှင့်လျှောက်လွှာတုံ့ပြန်ချက်အပေါ်အခြေခံသည်，စဉ်ဆက်မပြတ်ထုတ်ကုန်ပိုကောင်းအောင်နှင့်တိုးတက်အောင်，သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်。ငါတို့သည်သင်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီဖြေရှင်းချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်。
ကုမ္ပဏီသည်အဓိကမူပိုင်ခွင့်နည်းပညာများကိုပေါင်းစပ်ရန်အခိုင်အမာပြောဆိုသည်，ဘဝသစ်တစ်ခုရရှိရန်စိတ်ကူး! အရှိဆုံး core ကိုနည်းပညာများစုစည်း，ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်，ဂေဟဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ဘဝအတွက်မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ。
Wixhc Core Synthesis Technology သည်ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး CNC ကုမ္ပဏီဖြစ်လာရန်ကတိကဝတ်ပြုထားသည်，၎င်းကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အယုံကြည်ရဆုံးကုမ္ပဏီဖြစ်စေပါ。
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏လုံခြုံမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်，ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံသောလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရှိသည်，ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာပါ，ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများသည် ISO9001 ၏အရည်အသွေးပြည့်ဝသောနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုအပြည့်အ ၀ ဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့သည်。
မူပိုင်ခွင့် core ကိုနည်းပညာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်မူပိုင်နည်းပညာရှိသည်，ထုတ်ကုန်အများအပြားစီးရီးမှအသုံးချ，Customizable ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြေရှင်းချက်များနှင့်ထုတ်ကုန်。စက်မှုအဝေးထိန်းပါဝင်သည်、ကြိုးမဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်ကိုင်、စီအင်စီအဝေးထိန်း、လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ကဒ်、ပေါင်းစည်း CNC စနစ်နှင့်အခြားထုတ်ကုန်。
စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်လမ်းပြ
နှစ် ၂၀ ကျော် CNC စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ရောင်းခြင်းနှင့်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်း，မူပိုင်ခွင့်များ 20+ မူပိုင်ခွင့်ရှိသည်，ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘက်ပေါင်းစုံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးကွန်ယက်ရှိပါစေ，7 * 24 နာရီပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေး。
လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုဘယ်မှာလဲ，Wixhc core ကိုပေါင်းစပ်နည်းပညာထုတ်ကုန်ရှိပါတယ်ဘယ်မှာ。ကျနော်တို့တဖြည်းဖြည်း CNC CNC ၏လယ်ပြင်၌သြဇာအရှိဆုံးကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်လာသည်，ဖောက်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အမြင့်ဆုံးတန်ဖိုးကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ဖန်တီးပါ，လက်ချင်းချိတ်။，အတူတူဖွံ့ဖြိုး，အတူတူတိုးတက်ပါ。convergence core ကိုနည်းပညာ，ထုတ်ကုန်မှလျှောက်ထား；ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ၀ န်ထမ်းများ၏ကောင်းမွန်သောဘဝအတွက်မဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပြုလုပ်ပါ。
မကြာသေးမီနှစ်များက，မူပိုင်ခွင့်သည်အဓိကနည်းပညာများကိုဆက်လက်ရရှိသည်。ကျနော်တို့အသုံးပြုသူတုံ့ပြန်ချက်၌ရှိကြ၏、လျှောက်လွှာများ、နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွင်အောင်မြင်မှုများအသစ်ရရှိခဲ့သည်，ပိုမိုမြင့်မားပြီး ပို၍ ဝေးသောပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်နေခြင်းဖြစ်သည်。
ရွေ့လျားမှု ထိန်းချုပ်ကတ်ကို ကြည့်ရှုရန် နှိပ်ပါ။
xinhecheng2022-03-04T07:03:13+00:00March 4th, 2022|ကုမ္ပဏီသတင်း|
2022နှစ်，ရောင်းရန်，ရောင်းရန်，ရောင်းရန်、ထုတ်လုပ်မှုလိပ်စာကို Chengdu ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစီးတီးသိပ္ပံနှင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းဆိပ်ကမ်း - Liandong U Valley စက်မှုပန်းခြံသို့တရားဝင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်，ရောင်းရန်、ရောင်းရန်，ရောင်းရန်。 ရောင်းရန်，见证芯合成的发展与壮大吧！ 芯合成办公大楼 会议室 生产区 打包区、仓储区 【关于芯合成】 “聚合核心技术，ရောင်းရန်，ရောင်းရန်，ကြိုးမဲ့အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ရေးသုတေသနကိုအာရုံစိုက်ပါ，စက်မှုအဝေးသင်ထိန်းချုပ်မှုမှကျူးလွန်、ကြိုးမဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်ကိုင်、စီအင်စီအဝေးထိန်း、လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ကဒ်、ပေါင်းစည်းထားသော CNC စနစ်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များ。ကျနော်တို့က CNC စက်ကိရိယာစက်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်း၌ရှိကြ၏、သစ်သား、ကျောက်ခေတ်、သတ္တု、ဖန်နှင့်အခြားပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်းများသည်ဖောက်သည်များအားအဓိကနည်းပညာယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုပေးသည်、တန်ဖိုးနည်း、မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်、လုံခြုံစိတ်ချရသောထုတ်ကုန်များ、ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ，ဂေဟစနစ်မိတ်ဖက်များနှင့်ပွင့်လင်းသောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု，ဖောက်သည်များအတွက်တန်ဖိုးဆက်လက်ဖန်တီးရန်，ကြိုးမဲ့အလားအလာထုတ်လွှတ်ပါ。 【产品展现】 工业遥控器 点击查看 > > > >
ဟွမ်, ဟွမ်2022-01-21T08:48:33+00:00January 21st, 2022|အမျိုးအစားခွဲခြားထားခြင်းမရှိပါ။|
Chengdu Xinhesheng Technology သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ရှန်ဟိုင်းစက်ကိရိယာပြပွဲတွင်ပြသခဲ့သည်
အက်မင်2021-05-12T02:51:46+00:00May 11th, 2021|ကုမ္ပဏီသတင်း|
上海机床展览会（CME）是中国最知名、最具影响力的机床展之一。由商务部外贸发展局主办。集中展出金属切削机床、金属成型机床、工量刃具、စက်ကိရိယာတန်ဆာပလာများ、智能工厂等全球知名品牌产品及前沿技术，是全球装备制造业发展水平和前沿信息的国际化窗口，也是华东地区及全国机床设备最新技术产品集中采购的交易平台。 上海机床展CME上届展会总面积130000平方米，参展企业1500家，参展人数达130000人。上海机床展CME携全新地阵容与规模重磅来袭，立志打造一场国家化水平顶级机床交易盛宴。 上海机床展CME以逐渐成为展示我国装备制造业发展先进水平和前沿信息的国家级窗口，是我国传统装备制造及新型智能装备制造企业面向全球专业观众展示自身发展高度和展商有些产业及技术的权威平台，为拥有核心竞争力和国际影响力的品牌企业提供了展示机会，也是装备制造企业展示企业形象，寻求市场合作、扩大行业影响、开拓市场机会的最佳选择。 在此次展会上，我司展示的产品，得到了国内外参展者的强烈兴趣和广泛关注。 为期3天（5月6-8日）的展会，芯合成展台吸引了无数参展者的驻足，工作人员也始终以热情饱满地、耐心地与参展者沟通，展品的特色和优势在工作人员精彩的演说及演示下被展现得淋漓尽致，会场上的专业观众及参展企业对产品有一定了解之后，都表现出浓厚的合作意向。 在数控遥控器产业风起云涌的今天，把握需求即是把握明天。芯合成将以更为成熟、专业的态度，为机床行业提供专业、高效的化解决方案，为机床产业的繁荣发展添砖加瓦!
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Monsters, ယခင်ဖောက်သည်
Wixhc အဖွဲ့သည်အကြီးမားဆုံးခံစားမှုဖြစ်သည်：အလွန်ကောင်းမွန်သောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောရောင်းအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါ，အသုံးပြုသူများ၏ထင်မြင်ချက်များကိုဂရုတစိုက်နားထောင်ပါ，နှင့်ထုတ်ကုန်တိုးတက်စေရန်နှင့်မြှင့်တင်ရန်ဆက်လက်。
စတီဖင် Cronin, နိုင်ငံတကာကနာမည်ကြီး CNC ကုမ္ပဏီ၏ CTO
ကမ္ဘာအနှံ့အပြားရှိစိတ်ကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းသောဖောက်သည် ၁၀,၀၀၀ ကျော်နှင့်အလျင်အမြန်ပူးပေါင်းပါ။
တိုင်ပင်ပြီးယခု ၀ ယ်ပါ!
Wixhc ၏အဓိကပေါင်းစပ်နည်းပညာသည်ကြိုးမဲ့ဂီယာနှင့်ရွေ့လျားမှုထိန်းချုပ်မှုနယ်ပယ်တွင်နှစ် ၂၀ ကျော်ကြိုးစားခဲ့သည်，ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိသောင်းနှင့်ချီသောဖောက်သည်များ၏စုဆောင်းထားသောပုံမှန် application များ。
ကျွန်ုပ်တို့တွင်မူပိုင်ခွင့်ရှိသောအဓိကနည်းပညာများစွာနှင့်ခိုင်မာသည့် R&D အဖွဲ့ရှိသည်，စီဒီစီစနစ်နှင့်ဆက်စပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထုတ်ကုန်များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်တည်ဆောက်နိုင်သည်。
စိတ်ကို ဦး တည်သည်，New Leaps "—၂၀၂၀ တွင်ကုမ္ပဏီ၏နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး၏အစီရင်ခံစာ
အဆောက်အဦ 1၊ အမှတ် 1919၊ Shuangyan လမ်း၊ ရေလက်ကြားဖြတ် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပန်းခြံ၊ Chengdu
ဝက်ဘ်: Wixhc Core Synthesis နည်းပညာ
ပေါင်းစပ် CNC စနစ် ထိတွေ့မျက်နှာပြင် CNC ကွန်ပျူတာ-SP6L $800.00
Multi-switch စက်မှုကြိုးမဲ့အဝေးထိန်း DH05 $550.00
ကြမ်းပြင်ကြိတ်စက် စက်မှုအလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်မှု အဝေးထိန်းခလုတ် DH22-2R-7K $260.00
©မူပိုင်ခွင့် 2000 - | Wixhc Wixhc နည်းပညာ | မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး | မှပံ့ပိုးသည် Wixhc.cn
Core Synthesis Technology သည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်、ဟင်းသီးဟင်းရွက်、အဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ်အရောင်း，ကြိုးမဲ့အချက်အလက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ရေးသုတေသနကိုအာရုံစိုက်ပါ，စက်မှုအဝေးသင်ထိန်းချုပ်မှုမှကျူးလွန်、ကြိုးမဲ့အီလက်ထရောနစ်လက်ကိုင်、စီအင်စီအဝေးထိန်း、လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်ကဒ်、ပေါင်းစည်းထားသော CNC စနစ်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များ。လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ကဏ္ all အားလုံးကိုသူတို့ရဲ့ခိုင်မာသောပံ့ပိုးမှုနဲ့ကိုယ်ကျိုးမဖက်စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်，သူတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် ၀ န်ထမ်းတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်。
ပေါ့ပါးသွက်လက်စွာ တည်ဆောက်ခြင်းကို အသေးစိတ်ကြည့်ရှုပါ။ #woocommerce ဆိုင်မှာ ငွေရှင်းတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့ #ဖွင့်သည်။ & သင့်ဖောက်သည်များကို ချောမွေ့စေရန်... twitter.com/i/web/status/1…
4 နာရီ လွန်ခဲ့သော
12 နာရီ လွန်ခဲ့သော
နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်နောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်စာရင်းသွင်းပါ。စိတ်မပူပါနဲ့，ကျွန်ုပ်တို့သည် spam များကိုပို့မည်မဟုတ်ပါ။